Indawo yokuhlala yaseWild Valley Village
Le ndlu ithokomeleyo kumgangatho ophezulu wendlu yeeholide yindawo entle yokufumana ubomi kwilali yasentabeni ethe qelele e-mediterranean Ticino. Kwaye yimizuzu engama-25 kuphela ukusuka eLocarno! Ngaphesheya kwesitrato kukho igadi yabucala ekwilali. Iimbono ezivela kumyezo wale ntlambo eluhlaza ezele yimithi yesundu ziyaphefumla! Indlu efikeleleka ngokuthe ngqo kwindlela esembindini welali enkulu yentlambo.
Igumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, igumbi lokutyela / ikhitshi / igumbi lokuhlala, ipatio yabucala, kunye negadi emangalisayo ngokujonga intlambo.
Ilali yaseLoco yeyona inkulu kwi-Onsernone Valley entle kwaye iqulethe indawo yokutyela, ibha, ivenkile yokutya, iposi, i-ATM, kunye nemyuziyam yembali epholileyo! Kwaye ngaphantsi kwemizuzu eli-10 uhamba ukusuka endlwini yindawo yokuqubha engasese kumsinga ohlaziyayo wentaba! Ukongeza, ukunyuswa okuninzi kuwo onke amanqanaba kufumaneka macala onke.
Ndizakufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile kwaye ndiza kudibana nawe ukuze uphume kwaye uphume.